Ny fizahan-tany any Nepal dia mijery ny mpizahatany any India
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny fizahan-tany any Nepal dia mijery ny mpizahatany any India
Ny firenena Himalaya any Nepal, izay fanjakana taloha, dia manao ezaka lehibe mba hahatonga ny mpizahatany maro hitsidika avy any India mpifanila vodirindrina aminy. Ny firenena roa tonta dia efa nanana fifandraisana akaiky tamin'ny ezaka samihafa.
Ny fiheverana ny firenen'i Nepal dia novaina tamin'ny fifantohana bebe kokoa amin'ireo manintona maro ao amin'ny faritra havoana sy lemaka.
Misy teboka fidirana marobe izay tsy misy visa takiana hitsidika an'i Nepal izay mahatonga ny dia mora kokoa.
Mba hanamorana ny fivezivezena raha vao esorina ny sisin'ny COVID-19 dia hisy seranana roa vaovao miakatra.
Ny fivahiniana masina dia faritra iray izay nahasarika mpitsidika karana hatrany ny Tempolin'i Pashupatinath sy ireo toeram-pivavahana hafa i Nepal. Saingy androany, ny fizahan-tany Nepal dia manasongadina fa manan-javatra betsaka hatolotra ny firenena, araka ny nambaran'ny Dr. Dhananjay Regmi, Lehiben'ny Executive Executive ao amin'ny Nepal Tourism Board (NTB), tany New Delhi tamin'ny 23 martsa.
Dr. Regmi, izay manam-pahaizana momba ny jeografia ary nanao fikarohana betsaka talohan'ny nitondrany ny NTB, dia nitanisa antony maro ny antony tokony hahatongavan'ireo mpizahatany karana any amin'ny faritra maro any Nepal.
Ho an'ny iray, misy teboka fidirana marobe izay tsy mila visa. Ary koa, manana fotoana fitsidihana mandritra ny taona ny firenena. Ny fitsangantsanganana, ny fiakarana an-tendrombohitra, ny fiainana dia, ary ny renirano maro no antony sasany hahatongavana any Nepal, hoy izy, ary nampiany fa ny fitsangatsanganana an-tsekoly ho an'ny mpianatra dia làlana iray hafa andrasana hotadiavina.
Ny fiheverana ny firenena dia novaina tamin'ny fifantohana bebe kokoa amin'ireo manintona maro ao amin'ny faritra havoana sy lemaka, hoy ny sefo NTB. Ny Ramayana Ny fizaran-tany amin'ireo toerana misy ifandraisany amin'ny Lord Ram dia fisarihana lehibe iray, hoy izy niresaka, miaraka amin'ilay andriamanibavy velona, ​​Kumari, izay tokana amin'ny firenena.
Seranam-piaramanidina vaovao roa ho avy no hanamora ny fivezivezena raha vao esorina ny sisin'ny COVID-19. Raha ny tena izy, dia nanatsara ny fombafomba fitaterana i Nepal, hoy hatrany izy. Ary koa, tao anatin'izay taona faramparany, maro ny rendrarendra sy trano fandraisam-bahiny hafa tonga eto amin'ny firenena, ary ireo dia tsy any Kathmandu ihany fa any amin'ny faritra hafa any India ihany koa.
Dr. Regmi tamin'ny famoahana NTB dia nanambara fa ny taona lasa dia nanelingelina ny asan'ny fitsangatsanganana sy fizahantany eran'izao tontolo izao. I Nepal koa dia nijaly toy ny nanjo ny firenena hafa, saingy haingana ny fitantanan-draharahan'ny firenena hamaly ny areti-mifindra amin'ny alàlan'ny baiko ny fanidiana ny firenena ary hiomanana mandritra ny volana maromaro amin'ny alàlan'ny fividianana kojakoja sy kojakoja ilaina amin'ny fitsaboana, fanavaozana ireo fotodrafitrasa ara-pahasalamana, fampiofanana ireo mpitsabo. ary fanelezana ny fahatsiarovan-tena.
I Nepal no firenena voalohany am-polony taona lasa izay, izay nandehanan'ireo mpizahatany Indiana nanao fialantsasatra niantsena sy nankafy ny fialambolin'ireo trano filokana, taloha kelin'ny nalaina ny fizahan-tany ivelany tany amin'ny firenen-kafa. Ny Nepal Tourism Build dia miasa mba hananganana izany karazana fahitana izany mba hamerenan'ny mpizahatany India ny kolotsaina sy ny maritrano nentim-paharazana ary ny tranokalan'ny Lova Iraisam-pirenena fito, mba hanomezana anarana toerana mafana sasany.
WTTC mahita International Travel Resume hatramin'ny Jona amin'ity taona ity
Nosamborina! Voasambotra ireo mpamono liona Ogandà